Andro: 16 Desambra 2019
YHT Toeram-piasana lehibe amin'ny fikarakarana ny fiaramanidina mpiaro ny rivotra
YHT Maintenance Maintenance amenities TCDD Taşımacılık A.Ş. Tale jeneralin'ny talen'ny Yht Operation Directorate 2019/595431 GCC eo ho eo ny vidiny 369.754,00 TL YHT Fikojakojana Fikojakojana ny serivisy [More ...]
Fanolorana vaovao ho an'ny Station Yya Konya
New Tender ho an'ny Konya YHT Station; 2017 dia mikasa ny hisokatra amin'ny Oktobra ary 2016 dia notendren'ny TCDD tao 4734 araka ny Article 20 momba ny lalàna momba ny lalàna momba ny daholobe XNUMX. [More ...]
Kemal Demirel's Tononkira Hira Railway
Fampirantiana Tononkalo Tononkalo nataon'i Kemal Demirel; Kemal Demirel no mpanao politika voalohany tonga ao an-tsaina rehefa tonga ny lamasinina ao Bursa. Demirel, izay solombavambahoaka CHP Bursa tamin'ny vanim-potoana 2, dia nanolotra ny tononkalo sy mozika taorian'ny asa sahaniny tany amin'ny firenena rehetra. Hafa kosa ankehitriny [More ...]
TCDD Hanamboatra Bursa ho ivontoerana Logistik ho an'ny fitaterana entana
… Ao anatin'ireo lahateny, ireo izay tompon'andraikitra dia manohy manantitrantitra ny lalamby haingam-pandeha ho an'ny lalamby an-dalamben'i Bursa, saingy misy sisin-tsolika avo lenta amin'ny sokajy tetikasa. Raha atao amin'ny teny hafa, hisy ny tsipika amin'ny lalamby mitovy ho an'ny serivisy ho an'ny mpandeha sy ny mpitatitra entana. [More ...]
FedEx Express mba hanome tolotra ho an'ny Company in Torkia Haingana kokoa Manomboka
Mpanjifa in Torkia noho ny sidina mivantana kokoa dia hanana ny fahafahana ara-barotra manerana an'i Eoropa sy manerana izao tontolo izao. A FedEx Corp. (NYSE: FDX) ary FedEx, orinasa lehibe fitaterana eran'izao tontolo izao. [More ...]
Fiaran-dalamby ao Pristina
Pristina dün Adem Jashari ”akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena omaly hariva tokony ho tamin'ny 20:00 alina, nisy lozam-pifamoivoizana nitrangan'ny fiara. Olona iray no naratra vokatr’izany loza izany. Fikarohana momba ny lozam-pifamoivoizana sy fikarohana [More ...]
A Voalohany ao Torkia! .. Mediterane Coast Path Nahazo Smart
A Voalohany! .. Mediterane Coastal Highway ao Torkia Nahazo Smart; Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan dia nilaza fa vita ny fanamboarana fotodrafitrasa fibre tamin'ny 505 kilometatra amin'ny làlana andrefan'i Mediterane, izay natsangana ho fampiharana Smart Road Pilot. [More ...]
Balıkesir Traffic 53 Navoakan'ny rafitra intersection Smart
Vokatry ny asa fanitarana arabe izay natao tamin'ny alàlan'ny fanokafana ny lalamby eny amin'ny Station, House of Government and Clover Junction miaraka amin'ny torolàlana an'i Balıkesir Metropolitan Mayor Yücel Yılmaz; Araka ny angona azo avy amin'ny rafitra intersection hendry, ny isan-jaton'ny fifamoivoizana ao Balıkesir [More ...]
Ny fividianana fiara sy oniversite faha-Antalya faha-3 ao Antalya Vokatry ny malemy, ny departemanta Antalya Metropolitan Municiel momba ny fitaterana ny rafi-pitaterana sy ny rafi-pitaterana dia manana ny vidin'ny GCC tamin'ny taona 2019/580936 miaraka amin'ny 225.000.000 TL [More ...]
Fangatahana fangatahana vola amin'ny fividianana bisy EGO noresahina
Fangatahana fangatahana vola amin'ny fividianana bisy EGO; Ny farany tamin'ny fivoriana tamin'ny volana desambra tao amin'ny Filankevitra monisipaly Ankara dia nisy teo ambany fitarihan'ny filoha Mansur Yavaş. Efitrano Fivoriamben'ny kaominaly Metropolitan sy ny tombotsoan'ny olona [More ...]
Tsenan'ny Auto Auto Garage Manisa
MANULAŞ A.Ş., orinasam-pahefana ao amin'ny kaominina Manisa Metropolitan. Manisa Old Garage Open Auto Market izay ampiasain'ny. Tany am-piandohan'ny andro voalohany, mpankafy fiara an-jatony no nirohotra nankeny amin'ny tsenan'ny fiara. [More ...]
Ny ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Vahap Seçer dia nihaona tamin'ny mpianatra nianatra tao amin'ny University Mersin, Tarsus University, Toros University ary University of Çağ. Misafidiana ny saran-dalan'ny bus amin'ny tanora ho 1 lira [More ...]
Sakarya dia manao dingana vaovao sy maoderina amin'ny fitaterana
Ny ben'ny tanàna Ekrem Yüce dia nanambara fa hanamboatra lalana hafa izy ireo avy any Sebahattin Zaim Boulevard ho any amin'ny faritra Serdivan ary nilaza: [More ...]
Ferrari, fiara 2020 Formula 1 SF1000